मौरी उत्पादन: मूल Superfoods - जे एन्ड एस Botanics
०868686457 27 २858555888
मौरी उत्पादन: मूल Superfoods
नम्र मौरी प्रकृति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जीव को छ। मौरीले तिनीहरूले फूल बाट अमृत भेला तिनीहरूले बिरुवाहरु मतगणना किनभने हामी मानिसहरूलाई खान भनेर खाना को उत्पादन को लागि महत्वपूर्ण छन्। मौरीले बिना हामी एक कठिन समय हाम्रो खाना धेरै बढ्दै हुनेछ।
हाम्रो कृषि आवश्यकता हामीलाई सहयोगका साथै, मौरीले हामी बाली र प्रयोग गर्न सक्ने धेरै उत्पादनहरु बनाउन। मान्छे सङ्कलन गरिएको छ र सहस्राब्दियों लागि तिनीहरूलाई प्रयोग र खाना, स्वादिष्ट र चिकित्सा लागि तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर। आज, आधुनिक विज्ञान हामी सधैं ज्ञात के सम्म पक्रने छ: मौरी उत्पादनहरु ठूलो औषधीय र पोषण मूल्य छ।
मौरी उत्पादनहरु बारेमा सोच जब मनमा आउने पहिलो र सबै भन्दा स्पष्ट उत्पादन हो। यसलाई सजिलै किराना पसल मा उपलब्ध छ र धेरै मानिसहरू परिष्कृत चीनी ठाउँमा एक sweetener रूपमा यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। मह मौरीले फूल बाट अमृत सङ्कलन बनाउन कि खाना छ। तिनीहरूले regurgitating र यो कि माथि आफ्नो प्राथमिक सामाग्री बनाउन शर्करा ध्यान गर्न वाफ बन्नु दिँदै द्वारा मह मा अमृत बारी। चिनी बाहेक, मह भिटामिन, खनिज, फाइबर, प्रोटिन र अन्य पदार्थ को ट्रेस रकम समावेश गर्दछ।
मह को स्वाद विशिष्ट र अन्य शर्करा एउटा राम्रो वैकल्पिक छ। तर मह गरेको लाभ स्वाद र मिठास परे टाढा जाने। मह धेरै स्वास्थ्य लाभ छ, दुवै कुरा रूपमा खान र एक सामयिक दबाइ रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ। सजग तपाईँले प्रयोग मह कच्चा र प्रसोधन नगरिएका हुनुपर्छ भनेर, तर, हुन।
Antioxidants । मह पर्यावरण toxins हाम्रो शरीर गर्न गरेको क्षति मर्मत गर्न मदत जो एंटीओक्सिडेंट, मा धनी छ। को को मह गाढा, यो मा वर्तमान अधिक एंटीओक्सिडेंट।
एलर्जी राहत । कच्चा र प्रसोधन नगरिएका मह pollens, माटो, र धूलो सहित वातावरण, देखि allergens समावेश गर्दछ। तपाईं हरेक दिन आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादित थियो फिल्टर नगरिएका मह थोडा खान भने, तपाईंले आफ्नो एलर्जी लक्षण राहत प्राप्त गर्ने पाउनुहुनेछ। Allergens संग dosing द्वारा तिनीहरूलाई एउटा प्राकृतिक प्रतिरक्षा निर्माण।
पाचन स्वास्थ्य । मह दुई तरिकामा पाचन सुधार देखाइएको छ। माथिल्लो जठरांत्रिय पर्चा मह को जीवाणुरोधी गुण अल्सर कारण छ कि जीवाणुहरु को स्तर कम गर्न सक्छ। कोलनले मह मा पाचन सहायता probiotics प्रदान गर्दछ।
घाउ निको पार्ने । एक सामयिक मलम रूपमा, मह घाउ उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो एंटीबायोटिक प्रभाव छ र घाउ सफा राख्छ निको सकून् अधिक चाँडै।
विरोधी भडकाऊ प्रभाव। तीव्र सुनिंनु निको पार्ने प्राकृतिक भाग हो, तर कारण गरीब आहार त धेरै अमेरिकी afflicts कि कम ग्रेड, पुरानो सुनिंनु हानिकारक छ। मह हृदय रोग बढाउँछ भन्ने धमनिहरु मा पुरानो सुनिंनु कम चिनिएको छ। यो पनि असल र खराब कोलेस्ट्रोलको मात्रा बीच अनुपात stabilizes।
दमन खोकी। तपाईं एक चिसो छ अर्को समय तातो चिया एक कप गर्न मह एक चम्मच थप्नुहोस्। मह खोकी दबा र यो एक चिसो निको र यसको अवधि कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ केही प्रमाण पनि हो।
टाइप-2 मधुमेह। संग प्रकार-2 मधुमेह मान्छे को लागि, यो चीनी संग रगत बाढी छैन महत्त्वपूर्ण छ। मह यो एक राम्रो विकल्प मधुमेह लागि बनाउँछ जो परिष्कृत चीनी भन्दा रगत, मा थप बिस्तारै जारी छ।
मौरी पराग मह फरक छ। यो मौरीले फूल बाट संकलित र साना granules मा पैक छ कि पराग छ। यस मौरीले लागि, पराग बलमा को hive भण्डार र प्रोटिनको स्रोतको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूले hive अन्य घटक मा पराग यो मौरी गरेको र्याल, ब्याकटेरिया, र अमृत देखि इन्जाइमहरु सहित थपिएका छन् प्याक रूपमा।
मानिसहरूलाई, मौरी पराग एक पोषण Powerhouse छ र त्यहाँ आफ्नो नियमित आहार को एक भाग रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न धेरै कारणहरू छन्। यो कि मौरी पराग मह र शाही जेली जस्तै अन्य मौरी उत्पादनहरु फेला परेन छ थाहा महत्त्वपूर्ण छ। additives संग मौरी पराग उत्पादनहरु पनि सावधान रहन। यी प्राकृतिक उत्पादनहरु छैनन् र पनि हानिकारक हुन सक्छ।
पोषण पूरा भयो। मौरी पराग हामी मानिसहरूलाई यो सानो granules मा आवश्यक पोषक सबै समावेश गर्दछ। यो प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, बोसो, एंटीओक्सिडेंट, भिटामिन, र खनिज छ। यसलाई पूर्ण खाना छ।
वजन नियन्त्रण। मौरी पराग मान्छे वजन र व्यवस्थापन एक स्वस्थ आहार र नियमित व्यायाम गर्न पूरक रूपमा प्रयोग गर्दा मदत गर्न पाइएको छ। यो शरीर गरेको चयापचय उत्तेजक द्वारा मदत गर्न सक्छ।
पाचन स्वास्थ्य। अनुसन्धान मौरी पराग खाने आफ्नो पाचन स्वास्थ्य सुधार गर्न सक्ने देखाएको छ। यसले probiotics साथै फाइबर समावेश भन्ने तथ्यलाई द्वारा बताए हुन सक्छ।
रक्तअल्पता। दिइएको मौरी पराग रक्तक्षीणताले पीडित विरामीहरु को रगत रातो रक्त मा वृद्धि अनुभव। यो किन भयो बुझे छैन, तर मौरी पराग पूरकता रक्तअल्पता मानिसहरूलाई मदत देखिन्छ।
रक्त कोलेस्ट्रल को स्तर। एक पूरक रूपमा मौरी पराग पनि रगत कोलेस्ट्रल को स्तर को विनियमित देखाइएको छ। यो बेला खराब कोलेस्ट्रोलको मात्रा (एलडीएल) को स्तर तल जाने, गएर राम्रो कोलेस्ट्रोलको मात्रा (एचडीएल) को स्तर गराउँछ।
क्यान्सर रोकथाम। चूहों अध्ययन मा, आहार मा मौरी पराग ट्यूमर को गठन रोकियो।
दीर्घायु। धेरै अध्ययन मौरी पराग केही बुढ्यौली प्रक्रिया को धीमा योगदान कि देखाएका छन्। यो स्मृति बढाउने चयापचय उत्तेजित, हृदय र धमनिहरु बलियो देखिन्छ, र तिनीहरूले उमेरअनुसार धेरै मानिसहरूलाई कमी कि पोषक प्रदान गर्दछ।
यस कामदार मौरीले फीड जो मह, संग भ्रमित हुँदैन, शाही जेली रानी मौरी लागि खाना, साथै एक बस्ती मा लार्वा छ। शाही जेली कामदारको मौरी भन्दा रानी मा एक जीव बदलन लागि जिम्मेवार को कारक को हो। शाही जेली को संरचना पानी, प्रोटिन, चिनी, बोसो, भिटामिन, एंटीओक्सिडेंट, एंटीबायोटिक कारक, ट्रेस खनिज, र इन्जाइमहरु को एक सानो बिट समावेश छ। यो पनि जो अनुसन्धानकर्ताहरूले अनुसन्धान गरिरहेका रानी मौरी एसिड भनिने मिश्रित सामेल र रानी मा एउटा साधारण मौरी परिवर्तन गर्न प्रमुख हुन लाग्यो जो।
छाला हेरचाह। किनभने यसले सूर्य देखि छाला जोगाउन मदत गर्न सक्छ शाही जेली केही सामयिक सौंदर्य उत्पादन पाउन सकिन्छ। यो कोलैजेन पुनस्थापित र खैरो स्पट दृश्यात्मकता कम सहित सूर्य, द्वारा पहिले नै कारण भएको क्षति केही पनि सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
कोलेस्ट्रोल। मह र मौरी पराग दुवै रूपमा, खपत शाही जेली रगतमा असल र खराब कोलेस्ट्रोलको मात्रा बाहिर सन्तुलनमा देखाइएको छ।
विरोधी ट्यूमर गुणहरू। केही अध्ययन शाही जेली, जब क्यान्सर कक्षहरू मा इंजेक्शन, ट्यूमर को विकास धीमा गर्न सक्ने देखाएका छन्।
प्रजनन स्वास्थ्य। शाही जेली केही प्रेरकों यो एक महिलाको प्रजनन सुधार गर्न सक्नुहुन्छ र पनि पीएमएस को लक्षण relive भन्छन्।
पाचन स्वास्थ्य। शाही जेली पनि कब्जियत गर्न अपच गर्न अल्सर देखि पेट अवस्था एक नम्बर soothe गर्न सक्षम हुन ज्ञात छ।
अन्य मौरी उत्पादन
कच्चा जैविक, र प्रसोधन नगरिएका मह, मौरी पराग, र शाही जेली सबै आफ्नो मनपर्ने स्वास्थ्य स्टोरमा फेला पार्न अपेक्षाकृत सजिलो, वा अझ राम्रो अझै एक स्थानीय beekeeper छन्। त्यहाँ साथै अध्ययन गरिएका छैनन् र जो केही अन्य hive मा मौरीले गरेको उत्पादनहरु छैन मा आफ्नो हात प्राप्त गर्न रूपमा सजिलो छन्। बिरुवा, उदाहरणका लागि, मौरीले रुखको रस र तिनीहरूले hive मा सानो चर्किएको र प्वालहरू मुहर प्रयोग जो देखि बनाउन कि resinous सामाग्री छ।
मानिसहरूलाई, बिरुवा सामयिक अनुप्रयोगमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो गम चबाने बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ हुनत, एक पोषण खाना उत्पादन छैन। बिरुवा जीवाणुरोधी गुण छ र लामो घाउ, मुखासे, र छाला rashes लागि सामयिक उपाय रूपमा प्रयोग गरिएको छ। सीमित प्रमाण यो पनि herpes, दाँत संक्रमण, र भडकाऊ रोगहरु उपचार गर्न मद्दत गर्न सक्छ देखाउँछ। प्रमाणलाई निश्चय गरिदिने छैन, तर बिरुवा प्रयोग गर्न सुरक्षित छ।
Beeswax कि मौरीले आफ्नो मह combs को थोक अप गर्न प्रयोग फैटी पदार्थ हो। यो पचाउन गर्न कठिन छ कि अर्थमा खाद्य छैन। यो विषालु छैन, तर तपाईं यसलाई खान प्रयास यदि तपाईंलाई बाहिर धेरै पोषण प्राप्त हुनेछ। के यो प्राकृतिक कस्मेटिक्स, साबुन, क्रीम, र मोमबत्ती गरिरहेको छ लागि राम्रो छ।
Smoothies मा मौरी उत्पादन प्रयोग
मह, मौरी पराग, र शाही जेली सबै आफ्नो smoothies गर्न थप गर्न सकिन्छ। मौरी पराग र मह बारेमा ठूलो कुरा तिनीहरूले तपाईंलाई अद्भुत स्वास्थ्य लाभ दिने रूपमा साथै ठूलो स्वाद छ। मौरी पराग रूपमा मह रूपमा मीठा छैन, तर यो एक राम्रो स्वाद गर्छ। यो त यसलाई बिस्तारै परिचय, एक धनी खाना छ। एक समयमा केही अनाज सुरु र बिस्तारै तपाईं एक चम्मच र प्रति चाटुकर एक चमचा बीच प्रयोग राशि वृद्धि। तपाईंको smoothies मा मौरी पराग blending र आइसक्रिम मा sprinkles जस्तै माथि छिडकाव प्रयास गर्नुहोस्। मौरी पराग सुविधा मेरो चाटुकर व्यञ्जनहरु को लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।
मौरी पराग smoothies
के तपाईं प्रयोग हुन सक्छ कुनै पनि अन्य sweetener को ठाउँमा आफ्नो smoothies गर्न liberally मह थप्न सक्नुहुन्छ। यो सबै अन्य स्वाद राम्रोसँग विवाह, तर पनि यसको आफ्नै मा चमक गर्न सक्नुहुन्छ। सधैं जैविक र कच्चा मह खोज्न र स्थानीय बनाइएको उत्पादन पाउन सक्नुहुन्छ भने, कि अझ राम्रो छ। एक स्थानीय मह लागि आफ्नो निकटतम किसान गरेको बजार जाँच गर्नुहोस्।
शाही जेली को स्वाद सबैलाई अपिल छैन। यो tart हुन, र केही यसलाई वर्णन रूपमा, एक सानो fishy गर्न सक्नुहुन्छ। सुसमाचार तपाईं मात्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गर्न (प्रति चाटुकर एक चम्मच बारेमा) यो एक सानो बिट आवश्यकता छ भनेर र बलियो स्वाद आफ्नो चाटुकर मा मास्क सक्छ। वास्तवमा, स्वाद लुकाउन मह संग जोडी प्रयास गर्नुहोस्।
मौरी उत्पादनहरु आफ्नो पोषण सामग्री र तरिका को एक नम्बर मा मानव शरीर निको पार्ने क्षमता लागि उल्लेखनीय छन्। यी उत्पादनहरू प्रयोग गर्दा तपाईं एलर्जी मौरीले वा विचार तपाईं हुन सक्छ भने सधैं सावधान हुन। दुर्लभ गर्दा, तपाईं मौरी stings एलर्जी हो भने, मौरी उत्पादनहरु को कुनै एक तपाईं साथै प्रतिक्रिया छ गर्न सक्छ।
मौरी उत्पादनहरु संग आफ्नो अनुभव के हो? तपाईंले मनपर्ने छ? तल टिप्पणी छोडेर कृपया बताउनुहोस्।
पोस्ट समय: दिसम्बर-13-2016